आज मिति २०७७, भदौ ३० गते मंगलबारको दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित) – Nepali news portal
आज मिति २०७७, भदौ ३० गते मंगलबारको दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०७:४४ September 15, 2020 काठमाडौं डेष्क
मेष : आजैको दिनको लागि मात्रै बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै समय र पैसा खर्च गर्ने आफ्नो बानीमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। आफ्नो हँसिलो प्रकृतिले सामाजिक जमघटमा तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउनेछ। रोमान्सको लागि धेरै राम्रो दिन होइन किनकि तपाईंले साँचो प्रेम पाउन सक्नु हुनेछैन। आज सुरुदेखि अन्तसम्म काममा तपाईंले आफुलाई ऊर्जावान महसुस गरिरहनु हुनेछ। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आजभोली कुनै खुशी छैन; आफ्नो जोडीसँग कुरा गर्नुहोस् र साँच्चै रमाइलो केही योजना गर्नुहोस्।
वृष :हावामा महल निर्माण गर्नाले तपाईंलाई फाइदा हुने छैन। तपाईंले परिवारको आशा पूरा गर्नको लागि केही काम गर्नुपर्छ। हाल तपाईंको व्यक्तिगत जीवन तपाईंको ध्यानको प्रमुख कारण भएको छ – तर आज तपाईं सामाजिक काम, दान र तपाईंसँग समस्या लिएर आउनेहरूको मद्दत गर्नमा केन्द्रित हुनुहुनेछ। आज रोमान्सको लागि कुनै आशा छैन। सहकर्मी र वरिष्ठहरूले पूर्ण सहयोग दिएकोले कार्यालयमा काम छिट्टो हुनेछ। आज तपाईं आफ्नो जोडीसित आफ्नै तनाउको कारण झगडा गर्न सक्नुहुन्छ र वास्तवमा कुनै कारण हुँदैन।
मिथुन :तपाईंले आफ्नो तनाउ हटाउन सक्नुहुन्छ। आफ्ना व्यक्तिगत समस्याको समाधानको लागि कुनै मित्रले तपाईंको सल्लाह लिन सक्छ। आज तपाईंलाई गलत साबित गर्न मन पराउने एउटा लुकेको शत्रु हुनेछ। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। तपाईं आफ्नो कामुक वैवाहिक जीवनमा एउटा सुन्दर परिवर्तन अनुभव गर्न जानु हुँदैछ।
कर्कट : तपाईंको मुड परिवर्तन गर्न केही सामाजिक जमघटमा जानुहोस्। यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ। आफ्नो प्रेमीसँग बाहिर जाने हुँदा आफ्नो उपस्थिति र व्यवहार स्वाभाविक राख्नुहोस्। आज अनुभवी मान्छेसँग मिलेर तिनीहरूबाट केही सिक्नुहोस्। यो दिन तपाईंका जीवनको वसन्त जस्तै छ; रोमान्सले पूर्ण, तपाईं र तपाईंको जीवनसाथी।
सिंह: आज विगतका नराम्रो निर्णयहरूले हताशा र मानसिक उथलपुथल उत्पन्न गर्नेछन् – तपाईं असहाय भएर अब के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न असमर्थ हुन सक्नुहुनेछ – अरूबाट मद्दत माग्नुहोस्। वित्तमा निश्चित बढोत्तरी हुनेछ – तर त्यही समयमा व्ययमा पनि वृद्धि हुनेछ। आफ्ना छोराछोरीलाई तपाईंको उदार व्यवहारको फाइदा लिन नदिनुहोस्। “आज, तपाईंले आफ्नी प्रियतमाले तपाईंलाई कति प्रेम गर्छिन भन्ने महसुस गर्नुहुनेछ।” तपाईंका वरिपरि मानिसहरूलाई धेरै प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न तपाईं शक्तिशाली स्थितिमा हुनु हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो सम्बन्ध त्याग गर्नु झैं लाग्ने धेरै झगडाहरू हुनेछन्। तर, त्यति सजिलै सम्बन्ध त्याग नगर्नुहोस्।
कन्या : आफ्नो जाँगरको उत्थान गर्न तपाईंको मनमा एउटा उज्ज्वल, सुन्दर र महिमित तस्वीर बनाउनुहोस। तपाईंसँग बस्ने कोही तपाईंको आकस्मिक र अप्रत्याशित व्यवहारसँग निराश र दुखी हुन सक्छन्। प्रेममा हतार नगर्नुहोस्। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य गडबड भएकोले आज तपाईंको काममा केही समस्या हुन सक्छ।
तुला : हँसिलो हुनुहोस् किनकि यो तपाईंका सबै समस्याहरूको लागि उत्तमा विष मार्ने औषघि हो। शंकास्पद वित्तीय सम्झौतामा बाँधिनुबाट सावधान रहनुहोस्। तपाईंले प्रेम गर्नेहरूलाई उपहार दिने र उनीहरूबाट प्राप्त गर्ने शुभ दिन। तपाईंका प्रियले तपाईंलाई खुसी राख्ने कुराहरू गर्नेछन्। आज तपाईंको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको धेरै प्रशंसा हुनेछ र अनपेक्षित पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसँग जीवनको सबैभन्दा राम्रो साँझ बिताउन पाउनु हुनेछ।
वृश्चिक : तपाईंको हडबडे व्यवहारले पत्नीसँग सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। केहि पनि मुर्ख्याईंपूर्ण काम गर्नु अघि आफ्नो व्यवहारको प्रतिक्रिया सोच्नुहोस्। यदि सम्भव हुन्छ भने आफ्नो मुड परिवर्तन गर्न टाढा जानुहोस्। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। तपाईंको लापरवाही मनोवृत्तिले आमाबाबुको चिन्ता बढ्नेछ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ परियोजना सुरु गर्नु अघि उनीहरूलाई विश्वस्त गर्नु आवश्यक छ। आफ्ना प्रेमको अनावश्यक माग गर्न छोड्नुहोस्। तपाईंले आज आफ्नो जोडीसँग तनाउमुक्त दिन बिताउनु हुनेछ।
धनु : तपाईंको सहारामा धेरैले निर्भर गर्नेछन् र तपाईंलाई निर्णय लिनको लागि मनको स्पष्टता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग शान्तिपूर्ण र शान्त दिनको आनन्द लिनुहोस् – मान्छे समस्याहरू लिएर तपाईंसँग आए भने – तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र यसले तपाईंको मन खिन्न पार्न नदिनुहोस्। समस्या घरमै उत्पन्न हुन सक्छन् – तर साना कुराहरूको लागि आफ्ना जोडीको आलोचना गर्नबाट जोगिनुहोस्। आफ्नो मालिकले यसको टिप्पणी लिनु अघि रोकिएको काम पूरा गर्नुहोस्। तपाईं निष्कर्षको लागि हतारिनु भयो र अनावश्यक कार्यहरू गर्नुभयो भने यो एउटा दुखपूर्ण दिन हुनेछ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य गडबड भएकोले आज तपाईंको काममा केही समस्या हुन सक्छ।
मकर : पत्नीले तपाईंलाई खुशी बनाउन सक्छिन। सामाजिक गतिविधिहरुमा मजा हुनेछ तर तपाईंले अरूसित आफ्नो रहस्य साझा नगर्नुहोस्। आफ्नो प्रियसँग सानो छुट्टी मनाइरहेकाहरूको लागि अत्यधिक स्मरणीय समय हुनेछ। यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन हो; तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
कुम्भ : मुश्किल स्थितिको सामना गर्दा तपाईं दुखी नहुनुहोस्। खानाले आफ्नो स्वादको लागि नूनको ऋण लिएको हुन्छ – केही दुखको आवश्यकता पर्छ र त्यसपछि मात्रै तपाईंले आनन्दको मूल्य महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईंको मुड परिवर्तन गर्न केही सामाजिक जमघटमा जानुहोस्। सम्पत्ति सम्झौता कारोबार हुनेछ र त्यसबाट शानदार लाभ हुनेछ। प्रेम-सङ्गति र सम्बन्ध गाँसिनेमा वृद्धि हुने। आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ. चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो। कसैको व्यावसायिक प्रगति हुनेछ। आज तपाईंको जोडीले तपाईंको आवश्यकतालाई सन्तुष्ट गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ, जसले गर्दा अन्ततः तपाईंलाई निराशा हुन सक्छ।
मीन : कुनै हटाउन नसकिने परिस्थितिले केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। तर तपाईंले आफ्नो समतोलन राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ र समस्याको समयाधान गर्ने तुरुन्तै प्रतिक्रिया गर्नु हुँदैन। परिवारको भेलामा तपाईं सबैको केन्द्रविन्दु हुनुहुनेछ। कसै कसैको लागि सुन्दर उपहार र फूलले भरिएको रोमान्टिक साँझ। कार्यस्थलमा वरिष्ठ साथै सहयोगिहरुबाट समर्थन प्राप्त हुनाले तपाईंको हौसला बढ्नेछ। आज धेरै समस्याहरू हुनेछन् – जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।